Iiraan oo soo bandhigtay gantaal cusub oo ridda dheer | Baydhabo Online
Gaadiidka AMISOM oo Dilay 3 Soomaali ah...
Gaadiidka AMISOM oo Dilay 3 Soomaali ah
Kenya oo qorshe cusub la damacsan Soomaalida deegaanka ah ee ‘cuntada u galay’ qaxootiga
Dagaal goor dhow ka qarxay degmada Wanle-weyn & Warar ugu dambeeyey
Muxuu ku soo dhamaaday Kulankii Ra’iisul Wasaare Kheyre iyo Xildhibaanada ka soo jeeda Cadaado
Iiraan oo soo bandhigtay gantaal cusub oo ridda dheer
Warbaahinta dowladda dalka Iiraan ayaa shaacisay iney Tehran ay xuska sanad guurada kacaanka dalkaasi oo sabtida la qabtay ay ku soo bandhigtay gantaal casri ah oo ay riddadiisu gareyso 1,300 kilo mitir (800 oo mile).
Kacaanka Islaamiga ee dalka Iiraan oo dhacay 1979-kii wuxuu jirsaday 40 sano.
Tehran ayaa waxay sheegtay iney sii ballaadhisay barnaamijyada ay ku sameeysaneyso hubka iyo gantaallada riddada dheer iyada oo jawaab uga dhigeyso cadadiska ay Mareykanka iyo Waddamada reer galbeedka dalkaasi ku hayaan.
Sabtidi shalay ahayd Taliyaha sare ee ciddamada kacaanka Iiraan ayaa shaaca ka qaaday iney Iiraan ay ku qasbanaatay iney sii ballaadhiso islamarkaana xaddigii looga tala galay ay dhaafiso sameysashada gantaallada riddada dheer ayna ku kalliftay cadaadiska waddamada reer galbeedka uga imanaya ayna sii wadeyso ilaa miiska wada hadalka loo soo noqdo.
Wasiirka gaashaandhigga Iiraan Amir Hatami oo ka hadlay munaasabadda gantaalka lagu soo bandhigay ayaa wuxuu sheegay “Gantaalka la soo bandhigay inuu awood u leeyahay isaga oo bad sare ku soconaya uu muddo gaaban ku gaari karo halka lala beegsado”.
“Gantalkan lagu magacaabo Hoveizeh wuxuu ka mid yahay bahda gantaallada Soumar oo ay Iiraan sameysay sanadkii 2015-ka” ayuu yiri Hatami.
Khubarada reer galbeedkana waxay sheegeen iney Iiraan ay buunbuunineyso awoodda gantaalkan cusub ee ay sameeysatay balse uu ka duwaneen gantaalladi riddada dheeraa oo ay horay u sameysatay.
Taliyaha sare ee ciidamada Kacaanka Iiraan qaybta hawad sare Amirali Hajizadeh ayaa wuxuu sheegay “Iiraan oo horay ugu guuleystay iney sameeyso matoorka diyaaradaha dagaalka ee gantaallada riddada dheer xambaara ayaa waxay haddana ku guuleysatay ayuu yiri gantaallada riddada dheer oo uu ka mid ah gantaalkan maanta la soo bandhigay ee Hoveizeh.”
Muuqaal laga duubay gantaalka oo tijaaba lagu sameeynayo ayey wasaaradda ku sheegtay masaafa dhan 1,200 oo kiilo miitir oo gantaalakn lagu tijaabiyey in lagu guuleystay.
Tani iyo marki ay Iiraan heshiiska Niyuukilarka ay 2015-kii la gashay waddamada ugu quwadda weyn dunida waxay Iiraan sii wadday ballaadhinta Barnaamijkeeda gantaallada iyada oo aan dhag jalaq u siinin digniinta uga Imaneysa Mareykanka iyo Xulafadiisa.
Tijaabada gantaalkan riddada dheer ayaa waxay ku soo beegmeysaa xilli uu Mareykanka uu Tehran uga digay iney gantaal dambe tijaabinin ayna ku xad gudbin heshiisyada caalamiga ah.
Hase ahaatee, Iiraan ayaa sheegtay tijaabada gantaallada ee ay sameeyneyso inaysan ahayn mid ku xad gudbayo heshiisya caalamiga ah balse uu la mid yahay hanashada hubka Niyuukilarka ee ay waddama badanba haystaan.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump oo gabi ahaanba ka baxay heshiiskii Niyuukilarka ee Iiraan lala galay wuxuu Iiraan markale uu ku soo rogay cunaqabateyno isaga oo u sababeeynayo iney Iiraan dib u billaawday barnaamij ay hubka Niyuukilarka ku sameeysaneyso.
Dalka Iiraan oo in k abadan 20 sano cunaqabateyn iyo cadaadis caalami ahna uu saaran yahay lagana mamnuucay iney wax hub ah dibadda ka soo gashato waxay sii ballaadhisay barnaamijyadeeda ay ku sameeysaneyso gantaallada riddada dheer.